बुधबार चन्द्रग्रहण लाग्नेः सेक्स गर्दा यस्तो हुन्छ बेफाइदा, अरू के-के गर्न हुँदैन् ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more बुधबार चन्द्रग्रहण लाग्नेः सेक्स गर्दा यस्तो हुन्छ बेफाइदा, अरू के-के गर्न हुँदैन् ?
बुधबार चन्द्रग्रहण लाग्नेः सेक्स गर्दा यस्तो हुन्छ बेफाइदा, अरू के-के गर्न हुँदैन् ?
माघ १५ गते, २०७४ - १२:५०
काठमाडाैं । माघ १७ अर्थात बुधबार चन्द्रग्रहण छ । साँझ ५ देखि राती ८ः४५ बजेसम्म चन्द्रग्रहण लाग्ने जनाएको छ ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार, चन्द्रमा र पृथ्वीले चक्कर लगाउदै गर्दा सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा पृथ्वी पुगेपछि पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्न जाँदा चन्द्रग्रहण लाग्छ । विज्ञानले यसलाई समान्य प्रक्रियाका रुपमा लिने गरेको छ । यसले मानव जीवनमा केही फरक पर्दैन् ।
तर, शास्त्रहरुले भने यसलाई महत्व दिएको पाइन्छ । चन्द्रग्रहणको समयमा गर्नु नहुने काम भनेर छुट्याएको पाइन्छ । शास्त्रमा उल्लेख भए अनुसारका गर्नु नहुने काम गरे अप्ठ्यारो आउन सक्नेसम्मको चेतावनी दिएको पाइन्छ ।
ज्योतिषशास्त्र अनुसार निम्न काम गर्नु हुदैन्
तेल मासिलः ग्रहण लागेको समयमा तेल मालिस गर्नु नहुने उल्लेख छ । ग्रहणको समयमा तेल वा अन्य क्रिम लगाउदा छालाको समस्या हुने जनाएको छ ।
सुत्न नहुनेः ग्रहण लागेको समयमा सुत्न नहुने भनाइ छ । सुत्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हुने शास्त्रहरुमा उल्लेख छ ।
शारीरिक सम्बन्धमा बन्देजः ग्रहण लागेको समयमा शारीरिक सम्बन्ध पनि राख्न नहुने जनाएको छ । यस्तो बेला शारीरिक सम्बन्ध राख्दा जन्मिने सन्तानको स्वाभाव राम्रो नहुने उल्लेख छ । पति–पत्नीको सम्बन्धमा पनि असर पर्ने शास्त्रहरुमा चेतावनी दिइएको छ ।
माघ १५ गते, २०७४ - १२:५० मा प्रकाशित